Xayeysiisyada (advertisements) – Somaliland & World News Journal !
Everything You Wanted to Know About work
Home > Xayeysiisyada (advertisements)
Hargeysa.com waxuu ka mid yahay warbaahinta ugu waaweyn Somaliland. Waxay saameynteenu gaadhaa dhammaan daafaha dalka & caalamkaba. Annagoo ku saameyna dadweynahaas qaababka warbaahineed ee kala duwan, sida Hargeysa.com, Hargeysa TV iyo Hargeysa CityPages.
Haddii aad dooneyso inaad ku xayeysiisato mid ka mid ah warbaahinteena amaba dhammaantood, nala soo xidhiidh, waxaana kula soo xidhiidhi doona marka ugu horeysa ee ay noo suuro gasho mid ka mid ah wakiiladeena.
Wixii faahfaahin ah dheeraad ah, fadlan, la soo xidhiidh: hargeysaawinews@gmail.com
Waaxda Suuqgeynta & Isgaarsiinta,
Hargeysa.com is one of the leading news & information media in Somaliland, reaching out to the tune of millions of visitors from both at home & abroad, through our different media channels; Hargeysa.com, Hargeysa TV & Hargeysa CityPages.
For further information of how you can advertise with us, please, contact us & one of our representatives will respond to you as soon as possible.
Contact us: hargeysaawinews@gmail.com
Marketing & Communications Department,
City Pages (Hargeysaawi)